Kusukela kwesobunxele nguDkt Jaclyn Mann, Dkt Clinton Veale, noDkt Samuel Iwarere.
Ama-FLAIR Fellowship Kubacwaningi Abathathu base-UKZN
Ososayensi abathathu base-UKZN babalwa kubacwaningi abangama-30 base-Afrika abazoxhaswa emsebenzini wabo wocwaningo uhlelo lwe-Future Leaders – African Independent Research (i-FLAIR).
BangoDkt Clinton Veale wase-School of Chemistry and Physics, Dkt Jaclyn Mann wase-School of Laboratory Medicine and Medical Sciences (e-SLMMS), noDkt Samuel Iwarere wase-School of Engineering.
Usizo lohlelo i-FLAIR luhlose ukuthuthukisa ucwaningo oluzimele ezikhungweni zemfundo ephakeme zase-Afrika lugcine lwenze ukuthi abacwaningi bakwazi ukuhola amathimba abo ocwaningo.
Ama-Flair Fellowships, akhishwe okwesibili, angumkhankaso ohlanganyelwe yi-African Academy of Sciences ne-Royal Society, bebambisene ne-Global Challenges Research Fund ukweseka ikhono labacwaningi base-Afrika iminyaka emibili ukuthi benze ucwaningo lwezesayensi oluseqophelweni eliphezulu oluzosiza ukubhekana nezinselelo zomhlaba zamazwe asathuthuka. Lolu sizo lokucwaninga, kuka-US$391 500 umuntu eyedwa, kuyingxenye yomkhankaso wokuthuthukisa nokugcina ithalente kwezesayensi e-Afrika ukuphucula umkhiqizo wocwaningo nentuthuko.
Leli qoqo langonyaka wezi-2020 lwe-FLAIR Fellowship - elikhethwe phakathi kwabantu abangama-700 ebebefake izicelo - licwaninga ngezinto eziningi ezehlukene ezithinta i-Afrika njengezolimo, ezempilo, ukugcinwa kwamandla kagesi, nokunye. Abacwaningi bavela emazweni ehlukene okubalwa kuwona i-Sudan, i-Ethiopia, i-Madagascar, i-Cameroon, i-Uganda, iNingizimu Afrika, ne-Ghana.
U-Veale, ofundisa nongumcwaningi kwezekhemistri, uqokwe ngenxa yomsebenzi wokuthuthukisa izindlela zokuxhumana kwamaphrotheni (ama-PPI) ezifweni ezinganakiwe. Lolu cwaningo luyingxenye yomsebenzi wokubambisana phakathi kwe-KRISP, i-Rhodes University, ne-University of Edinburgh e-Scotland.
‘Lobu buchwepheshe buzosenza ukuthi sibone izithiyo zalezi zinto ekuhlwayeni kwethu imithi emisha,’ kusho u-Veale. ‘Sicwaninga i-PPI phakathi kwe-HSP90 ne-HOP emsebenzini wokwelapha umdlavuza webele, okuyisifo esihlasela abantu base-sub-Sahara kanti alikabi khona ikhambi layo okwamanje.’
U-Veale wathola iziqu zeMasitazi kwezesayensi yezokwelapha nezemvelo e-University of Edinburgh, walandelisa ngeziqu zobudokotela kwiKhemistri e-Rhodes University, waqala e-UKZN ngonyaka wezi-2019.
U-Mann, ofundisa nongumcwaningi e-SLMMS noyilungu le-HIV Pathogenesis Programme nomcwaningi omkhulu nemenenja e-Sub Saharan African Network for TB/HIV Research Excellence, uzocwaninga ngezicubu ezenza kube nzima ukwelapha isandulelangculazi. Ngalolu cwaningo ufisa ukuqhamuka nezindlela ezintsha zokwelapha lezi zicubu ezicashayo.
U-Mann, owafunda waqeqeshwa e-UKZN waqala ukufundisa eNyuvesi ngonyaka wezi-2013, uthe uyazibongela ngalolu sizo lokucwaninga.
U-Iwarere, ongumcwaningi e-Thermodynamics Research Unit (i-TRU) kwezobuNjiniyela bamaKhemikhali, wenza ucwaningo ngamandla e-non-thermal plasma (i-NTP), engubuchwepheshe bendlela yokucwenga amanzi emiphakathini entulayo ukubhekana nenselelo yabantu abaningi yokuphuza amanzi angahlanzekile.
U-Iwarere wenza izifundo zakhe zeMasitazi nezobudokotela e-UKZN. Iziqu zakhe zokuqala neze-Onazi kwezamaKhemikhali eziMboni wazenza e-University of Ilorin e-Nigeria.
‘Bekungumsebenzi odinga imali kakhulu lona kuyo yonke esangake ngaba kuyona,’ kusho u-Iwarere. ‘Yinto enkulu kimina ukukhethwa emhlabeni kanti ngibonga uNkulunkulu ngomusa wakhe, ngibonga ozakwethu abaphawule ngesicelo sami nangokulungiselela, ngibonga ne-TRU.’
Isifundiswa Sezemfundo Kwesomhleli we-Journal of Education
Ithimba Longoti Bezempilo Leseka Ukuvalwa Kokudayiswa Kukagwayi
Kukhuthazwa Ukuvikelwa Kwabaphethwe yi-COVID-19 Ekugulisweni Yimiphumela Yemithi Engalungile